कपिल र सुनिलको झगडा सकियो ? चाँडै ‘कमेडी शो’मा सँगै देखिने कपिलले दिए संकेत ! - Gokarna News
कपिल र सुनिलको झगडा सकियो ? चाँडै ‘कमेडी शो’मा सँगै देखिने कपिलले दिए संकेत !
एजेन्सी– कमेडियन कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोवरको झगडाले लामो समयसम्म चर्चा पायो । कपिल र सुनिलको झगडा सम्बन्धी सोसल मिडिया र विभिन्न अन्तर्वाताहरुमा उनिहरुबिचको चिसोपनालाई देख्न सकिन्थ्यो । तर अब भने कपिल र सुनिलबिचको झगडा विस्तारै साम्य हुँदैछ ।
लामो समयपछि कमेडियन कपिल शर्माले टिभिमा फर्कदै छन् । तेसोत, समाचारमा आएअनुसार कपिल शर्माको साथमा सुनिल ग्रोवर पनि सो ‘शो’मा फर्कने सक्नेछन् । यो कुरा कपिल शर्माले सांकेतिक भाषामा एक बयानमा दिएका छन् । यदि कपिलको त्यस बयान अनुसार कपिल र सुनिलको शो टिभिमा पुनः धमकेदार हुनेछ ।
एक पत्रकारको प्रश्नको उत्तर फर्काउँदै कपिलले भने, ‘हामी दुईबीच राम्रो बोन्डिङ छ । कुनै पनि समस्या छैन । भर्खरैसम्म हामी सँगै बसिरहेका थियौं । एकैसाथ हाँसिरहेका थियौं । आगामी हाम्रो प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं । सुनिल र मेरो बारेमा जुन विावद बाहिर आएको थियो, त्यो मिडियाको कारण हो । हामी चाँडै कमेडी ‘शो’मा फर्कदै छौं ।’
कपिलले ट्वीट गर्दै सुनिललाई बधाई दिए !
पछिल्लो समय कपिल शर्माले सुनिल ग्रोवरको आगामी फिल्म ‘पटाखा’को लागि ट्वीट गर्दै बधाई दिएका छन् । कमेडियन कपिलले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘बधाई तथा शुभकामना । मेरो फेभरेट विशाल भारद्धाज, रेखा भारद्धाज म्याम र (पटाखा)को पूरै टिमलाई धेरै शुभकामना ।’
कपिल शर्माको सोही ट्वीटमा सुनिल ग्रोवरले जवाफ फर्काउँदै धन्याबाद दिएका छन् । फ्लाई विवादमा कपिल र सुनिलको झगडा लामो समयसम्म चर्चामा आएको थियो ।